GoDaddy: avelao any aoriany ny baoty ary mandaka ny boriky | Martech Zone
Alatsinainy, 16 Jona, 2014 Alarobia, Septambra 29, 2021 Douglas Karr
halako GoDaddy. Tena nanao izany aho. Tsy nino aho fa afaka mandany dolara an-tapitrisany ny marika iray flavage manelatselatra ary manohy manangana orinasa be dia be. Izany dia tehamaina teo amin'ireo mpivarotra izay niasa mafy hitazomana ny marika ho manan-danja, mangarahara, matihanina ary manampy ny mpihaino azy ireo. Io no lalana mivoaka mora… ary toa mandeha izany. Nanoro hevitra ny mpanjifako rehetra aho hampiasa serivisy hafa ary hijanona lavitra.
Rehefa mandeha ny fotoana dia mihamaro hatrany ny mpanjifanay dia mampiasa GoDaddy. Ary tsy vitan'ny hoe nampiasa ny serivisy izy ireo, fa nilaza tamiko koa tena tsara ny serivisy ho an'ny mpanjifa avy amin'ny orinasa raha ny marina. Ka amin'ny lafiny iray dia orinasa iray izay miahy ny mpanjifany sy ny serivisy omeny… ary etsy ankilany ny fanentanana marika sy dokam-barotra izay tanora sy tsy mitondra loha.
Fa niova ny onja. Friend Christopher Carfi (izay nanatevin-daharana ny ekipan'i GoDaddy) dia nampifandray ahy tamin'ny talen'ny Senior of Public Relation, Susie Penner ary izaho dia nanao resadresaka nifanaovana tamin'ny Chief Communication Officer, Karen Tillman. Marina izany… a Susie ary ny Karen mitarika ny fifandraisana vaovao! Tsy i Karen irery no vehivavy amin'ny fitarihana zokiolona. Blake Irving, CEO vaovao an'ny GoDaddy voatendry tamin'ny faran'ny taona 2012 dia nanao fanovana maro tao amin'ilay orinasa mandroso ny marika… ary ankehitriny GoDaddy dia miomana amin'ny IPO-ny.
Miova koa ny doka ataon'i GoDaddy! Namoaka ity doka SuperBowl ity izy ireo izay manome marika sy hafatra hafa tanteraka ho an'ny daholobe, manampy ny olona hanova ny nofinofiny ho raharaham-barotra i GoDaddy.
Miaraka amin'ny serivisy tsy mampino - avy amin'ny Domains, Hosting, Managed WordPress Hosting, SSL certificates, Microsoft Office 365 hosting, Online Bookkeeping, Website Builder, E-commerce ary programa Fikarohana eo an-toerana… GoDaddy manana ny fitaovana mora indrindra azon'ny orinasa madinika. Nifanaraka tamin'ny serivisin'izy ireo lehibe ary matoky aho fa mandroso amin'ny lalana marina izy ireo.
raha ny boobvertising ao aorian'izy ireo, tsy midika izany fa lasa nalemy i GoDaddy! Zahao hoe Ny GoDaddy Manifesto an'ny Kick Ass:
Miarahaba anao, GoDaddy! Heveriko fa efa mandaka ampondra ianao.
Tags: Blake Irvingceo godaddychristopher carfigodaddyfanolorana ampaham-bahoakaipoKaren Tillmansusie pennerNy GoDaddy Manifesto an'ny Kick Ass
Accelerator accentator: ampifanaraho amin'ny fitaovam-barotra sy ny varotra